Madaxweyne Gaas Oo Heshiis La Galaya DP World Iyo Dowladda Farmaajo Oo Ka Aamusan – Goobjoog News
Ilo ku dhaw madaxtooyada Puntland ayaa Goobjoog News u xaqiijiyay in madaxweynaha maamulkaasi Cabdiweli Maxamed Gaas uu ku sii jeedo maanta magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka si uu heshiis ula saxiixdo shirkadda hor-u-marinta dekadaha ee DP World, shirkaddan ayaa maamuli doonta dekadda Boosaaso ee gobolka Bari.
In Heshiikaasi uu jiro, waxaa horay Goobjoog News ugu sheegay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, laakin waxaa muuqata hadda in uu gebogabo marayo.
Shirkadda DP World oo laga leeyahay Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa September sanadkii tagay la wareegtay dekadda Berbera, sida la sheegay, waxaa ay qarash-gareen doontaa ilaa $10 million oo qalab ah si loo dhiso dekadda, waxaa intaa dheer ilaa $5 million oo Kaash ah, 65% maamulka dekadda waxaa iska leh DP World, waxaa muhiim ah in aan wax cashuur ah laga rabin DP World muddo 10-ka sano ah, waxaa kaloo 50% laga cafin doonaa 5ta sano ee xigta.
Qaar ka tirsan Xildhibaannada golaha shacabka oo la hadlay Goobjoog News, waxaa ay sheegeen in ay diyaarinayaan mooshin ka dhan ah heshiisyada Imaaraadka, balse waxaa muuqato arrinkaas in ay aheyd iska hadal.
Aqoon-yahanno la hadlay Goobjoog News waxaa ay ka digeen damaca waallida ah ee Imaaraadka Carabta iyaga oo sheegay in dalkaasi Khaliijka ku yaallo uu meel uga dhacayo qawaaniinta caalamiga ah, isla markaana uu ku tummanayo qaranimada iyo midnimada Soomaaliya.
Arrinta kheyraadka iyo sida loo qeybsanayo weli kama wada hadlin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, xitaa haddii uu wada hadal jiro waa mid qabyo ah, siyaasadda arrimaha dibadda waxaa ay ka mid tahay 3 arrin oo uu dastuurka ku gaar yeelay dowladda federaalka ah, laakin waxaa cad in maamul goboleedyada aaney arrinkaas ku ixtiraamin dowladda dhexe.
Dowladda Federaalka ah iyo mas’uuliyiinteeda oo gaaraya tiro ahaan 399 mas’uul(marka la isku daro golaha fulinta iyo sharci dajinta) ayaanan heshiisyada imaaraadka wax dareen ah ka gelin, ma muuqato cid ay dhibeyso.
isotretinoin gel buy cialis for daily use cialis professiona...
buy viagra europe how to buy viagra in india cheap generic v...
price for cialis daily [url=https://cciialiis.com/]order cia...